MUUQAAL: Wasiir Qarjab oo la Saftay C.wali Gaas, Kana horyimid Go’aankii uu Qaatay Cabdixakiim Camey (Daawo) | KALSHAALE
MUUQAAL: Wasiir Qarjab oo la Saftay C.wali Gaas, Kana horyimid Go’aankii uu Qaatay Cabdixakiim Camey (Daawo)
Garoowe ( Kalshaale ) Cabdi Xirsi Qarjab Wasiirka Warfaafinta Puntland oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa Saxafiyiinta Faray inaysan Khalkhal gelin Xaalada Puntland, Wuxuuna usoo bandhigay sida ugu Haboon ee la doonayo inay Wararka u tebiyaan.
Dhinaca kale Isagoo ka hadlayey Xiisada Hogaanka Puntland, Ayuu kula saftay C.wali Gaas, Wuxuuna sheegay inuu Xaq u leeyahay Madaxwaynaha inuu soo saaro Gudiga Xalinta iyo Khilaafaadka, Wuxuuna sheegay inaan dadka lagu Wareerin Gudiga uu magacaabay Cabdixakiim Camey Madaxwyane ku xigeenka Puntland.
Qarjab si wanaagsan oo masuulnimo ka muuqata ayuu u hadlay . Tan ah mandate’ka gudiga qilaafaadka aqoon uma lihi , lkn hadana waxaad moodaa iney yihiin guddi uu soo xushay kaligii taliye . Waxaa kaloon meeshaba Lagu soodarin sharuudaha laga raba inuu buuxiyo qofka ka mid noqonaya gudigaas muhiimka ah iyo waliba cidda soo diyaarineysa gudigaas , oo ah kuwo iyana Lagu kalsoonyahay oon dhinacna u QALLOOCIN . Intaa Kadib cidkastoo xaq u leh ayaa MALMALUUQIKARTA saxiixa / sarciyeynta , jiritaanka iyo hawlgalka gudiga . Camey isagu waxiisa waa ku qabso ku qadimeyside!
Aragtideyda shaqsi : Reer Puntland sidey waxyeelaanba ha isku dayaan iney si degdeg ah u tirakoobaan shacabkooda . Dabadeed ha sharciyeeyaan XISBIYO siyaasadeed . Doorashada bisha Janaayo kadib haloo hawlgalo sidii doorashada xigta ay u noqonlahayd 100 % xalaal . Dawladgoboleed 20 jirsaday oo wali ay odayaal JUHALA ah soo dooranayaan golihii xeerdejinta waa daayeernimo aad iyo aad u weyn .
Kumaa wax laga bartaa kumaase wax la baraa , waxuba waa daayeer iyo daaxuurro FURDUDUGLEYNAYA’E.
Hooyada federalka fadhiid bay dhashay !
Gudiga khilaafaadka waxaa magacaaba Madaxweynaha intii madaxweyna puntland soo madhay kulli iyagaa gudigaa magacaabay.
3 Desember iyana waa maalinta lagu dhawaaqo.
Gudoomiye mar walba waxaa gudigaa ka noqda nin u dhasha beesha Axmed Harti Dashiishe.
Waana inta Gaas sameeyey dhana ugama uu leexan sooyaalkii ragii hore.Camay wixiise arintiisu waa iska docfaruur jeebkiisa ah
Waa ninkii Kutub been ah kumarey in Tukoraq la xoreyn doorashada ka hore.
Camey waa rèer Waqooyi, Garowena waa Koofur wixii isu keeney waa qabyaalad, Qarjabna dastuurkaas Qabyaalada ayuu fuliyey oo Gaas waa nin MJ ah, maamulkuna waa maamul MJ.
Gaas waa nin ku caano maaley Guddigii Qilaafadka ee doorashadii 2012,
Guddigaana waa la mid oo waa guddiga kala saaridoono Xildhibaanada Golaha deegaanka Puntland, yacni ninkuu ogolaado Gaas ayey sii deyn, kuu diidana waxey ku fulin qodobka Shuruudihii ma buuxin.
66 Xilmadhibe-Xamaalato ayuu rabaa Gaas iney codka dhiibaan oo uu dhamaantood – LABADA indhood uu ku scan gareeyey.
– Kii nala jiraan la jirnaa kii naga jiraan ka Jirnaa.
Anigu nin Majeerten ah oo aan ka aheyn, Cali Xaaji Warsame kuma ogi reer Bari. Asaga waan siin lahaa xataa Donation inkastuu u dhuran lafo abeeso.
Waa su’aal fiican Mr Qarjab, Candidate sax ah waxaad noqoneysaa 2022, waqtigaas oo ku aadan KALTANKA CIISE MAX’UUD.
Qarjab waa musharaxa 2022, inta laga gaarahayana waa wasiirka Ciise Max’uud uga wakiilkaa Maqaayadda MS.
Waxaan ku tilmaamikaraa Xariif Dhaar badan. Dastuurka kaltanka hala ilaaliyo.
Gudugu waxba kalama badeli karo xildhibaada wax soo dooranaya xildhibaan walba horaa beeshiisu usoo dooratay oo madax dhaqameedkiisu usoo ansixiyey.
Gudiga shaqadiisu waa hubin iyo inay qabtaan aqoonsiga xildhibaankaas oo kaliya.
Gudiga khilaafaadka madaxweyne walba oo soo maray isagaa doortay wax coda iyo guul midna uma soo hoyin madaweynayaashii ka horeeyey Gaas iyagaana wada magacaabay gudigaa. Puntland nidaan iyo dow loo maro iyo sooyaal bay wax walba leeyihiin maaha dameero iska biqlaynaya
Xaange ku mahadsanid faahfaahinta arrinka gudiga . Sxb waa ayaandarro inuu madaxweynaha isku darsado soo xulista , magacaabista iyo sharciyeynta gudiga qilaafaadka doorashada . Gudigani waxuu noqonayaa MARJACA kala saaraya xildhibaanada , oo waxay go’aan ka gaarayaan qilaafka u dhexeeya laba musharax-xildhibaan . Waxayna marwalba u xaglinayaan musharaxa uu ka raaliyahay madaxweynihii sameystay gudiga gacan ku rimiska ah .
Malaheyga waxaa fiicney iney seddaxdan hay’adood midkood magacaabaan gudigaas , madaxwenuhuna uu lahaada ogolaanshaha iyo saxiix-sharfeedka ugu dambeeya.
_ Baarlamaanka .
_ Golaha fulinta
_ Midowga xisbiyada / qabaa’illada .
Lkn nin isagiiba ah musharax madaxweyne hadana kaligii ha magacaaba gudiga KALAHUFIDDA xildhibaanada waa un KU SHUBO.
Xaange hadaba malaheyga waxaa qaldan magaca gudiga . Hadeysan inaba wax ka badelikarin dadkii ay soodoorteen oday-dhaqameedyada maxaa gudiga loogu bixiyey gudiga-qilaafaadka doorashada ?
Xaange waa runtaa oo gudigani waxuu isku xirxiraa ULO iyo XARGO lkn ABEESO weyn oo HALQAFTA ayuu Alle ku soo daayaa , waana sababta uusan wax uga faa’iidin kii sameystay gudiga !
Xasan Sheekh Maxamuud baa yaabay !